Baolina kitra: Ahmad Ahmad ao am-pon'ny famerenana amin'ny laoniny ny CAF - teles relay
Baolina kitra: Ahmad Ahmad ao am-pon'ny famerenana amin'ny laoniny CAF
By Chinde On Oct 1, 2020
Raha mbola tsy mpilatsaka hofidina amin'ny fomba ofisialy amin'ny fifidianana indray i Ahmad Ahmad tamin'ny martsa 2021, ny lehiben'ny kaonfederasiona afrikanina kitra dia manafaingana ny fandaminana indray ny fikambanana ary manendry talen'ny fifandraisana vaovao.
Raha ny angom-baovao azonay dia hisy talen'ny fifandraisana vaovao ho an'ny Confederation Football Afrikanina (CAF) handray ny asany amin'ny 11 oktobra. Kameroney ity Alexandre Siewe. Ity mpanao gazety teo aloha ity tao Jeune Afrique niasa nandritra ny telo ambin'ny folo taona tao amin'ny mpampita herinaratra Eneo, talen'ny marketing sy ny serasera. Tamin'ny taona 2018 dia nanomboka nanadihady sy nitantana ny ABK Radio izy.
ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.jeuneafrique.com/
Elite One & Elite Two: Fantatra ireo Kianja voafantina amin'ny vanim-potoana 2020-2021. - Andao Hiresaka Football 237
Ebola ao amin'ny RDC: OMS sy ONG lehibe eo afovoan'ny resaka firaisana ara-nofo